Yikuphi okunye ukuzivocavoca kwamawele amabili asanda kuhlangana? - Mytika Speak
Ikhaya / Amalangabi Amabili Nothando Olungcwele / Yikuphi okunye ukuzivocavoca kwamawele amabili asanda kuhlangana?
Kukhona izivivinyo eziningi ukuthi amawele amabili yenzani omunye nomunye ukuze nilinganise futhi nikhule ndawonye. Imininingwane yalokhu kuvivinya umzimba inganikezwa kubo ngemuva kokuhlangana futhi. Iziphakamiso ezilandelayo zingaba yindawo enhle yokuqala.
Dala imingcele futhi nibe nokuzivocavoca kwemingcele lapho nithembeke khona komunye nomunye futhi nikhulume ngalokho enikufunayo ebudlelwaneni. Omunye angaba nentshisekelo ebudlelwaneni bothando kanti omunye angaba nentshisekelo kubudlelwano beplato. Yize izinto zingahlala zishintsha, kuwumqondo omuhle ukusetha okulindelwe kusenesikhathi ukuze uqiniseke ukuthi zombili zisekhasini elilodwa. Lapho sihlangana futhi, kungaba lula kakhulu ukungena ezimpilweni zomunye nomunye futhi sithambekele masinyane komunye nomunye. Ukubeka imingcele kungaba isinyathelo esikhulu ekuqhubekeni ngendlela elinganiselayo.
Xoxani ngemibono yokubuka
Khuluma ngezinto empilweni ozizwa uqine kakhulu ngazo. Lokhu kungafaka ipolitiki noma inkolo noma yini nje. Zibeke lapho ngokuya ngokuthi ungubani nokuthi yini ozimisele ukuyishintsha ngokuqhathanisa nalokho omelene nakho. Lalelani ngempela omunye nomunye futhi niliqonde iqiniso lokuthi abantu banemibono ehlukile ngokususelwa empilweni abayiphilele ngawodwana. Ungazami ukushintshana kepha yiba nengxoxo lapho ungasiza omunye aqonde ukuthi kungani uzizwa ngalendlela ozizwa ngayo, ngenkathi wenza umzamo wokuyiqonda.
Khuluma ngabantu ababaluleke kakhulu empilweni yakho. Setha izigaba eziningi bese unquma ukuthi uzofaka bani esigabeni ngasinye. Isibonelo, ungabeka umndeni wakho kuTier 1 uma kungabantu ababaluleke kakhulu kuwe. Ungakhetha ukubeka abangani bakho kuTier 2 futhi mhlawumbe nomakhelwane bakho kuTier 3. Ayikho indlela elungile yokwenza lokhu etholakala kuwo wonke umuntu. Isihluthulelo ukunquma ukuthi ngubani oza kuqala. Uma abantu ababili bekubizele usizo, ungasiza bani uma ungasiza oyedwa kuphela? Lowo muntu kufanele abe kuTier eseduze (isibonelo iTier 1) kuqhathaniswa nomunye okungenzeka ukuthi useTier ephansi (isibonelo iTier 2). Lokhu kuvivinya umzimba kungasiza umuntu ngamunye kodwa kusize namawele abo ukuthi aqonde iqhaza elibanjwa umuntu ngamunye ezimpilweni zabo.
Khuluma ngezehlakalo ezinkulu ezenzeke kuwe empilweni. Ngokuhlaziywa okuthile uzothola ukuthi imicimbi yakho ihambelana nomunye nomunye. Lokhu kungenzeka ngezindlela ezifanayo noma eziphambene. Isibonelo, lapho omunye egula, kungenzeka ukuthi balulama ngokuyisimangaliso ngenkathi omunye egula. Ngaphandle kwalokho, bobabili kungenzeka ukuthi babegula okwesikhashana ngasikhathi sinye. Lesi yisibonelo samawele ngokungaqondakali abheke omunye ngokushintshanisa noma ngokulinganisela amandla nawo. Zama ukuqhathanisa ubude besikhathi sale micimbi futhi mhlawumbe uzokhula ukuqonda okujule kakhulu kokuthi kungani izinto zenzeka futhi ubone ukuthi nihlale nibhekelana kanjani ngokomoya. Amawele aklama ngokungaqondakali izimpilo zomunye nomunye ngakho-ke zama ukuthola ukuthi iwele lakho kungenzeka kanjani ukuthi lalilangazelela impilo owawuyiphila. Isibonelo, uma impilo yakho ibizinzile futhi ufisa ukuzijabulisa, iwele lakho kungenzeka ukuthi lalinokuphila okumnandi nokufisa ukuzinza. Zama ukugwema ukucasuka eweleni lakho. Nobabili nidale impilo yomunye ngokususelwa kulokho ebenizifunela ngakho isinqumo sithathwe endaweni yothando. Ukuqhubekela phambili, nizoqonda kangcono izidingo zomunye nomunye.
Ngenkathi wenza lezi zivivinyo, thembeka. Yisho ukuthi uzizwa kanjani ngayo yonke into. Uma ufuna ukuzwa uthando lwaphezulu nenkululeko eza nokwamukelwa okungu-100%, kufanele uvuleke u-100%. Zama ukukhumbula ukuthi ukhuluma nomphefumulo wakho lapho ukhuluma nawo ngakho-ke namaphutha akho ozibona kufanele kukhulunywe ngawo ngokuthembeka. Ngenkathi ubalalele, yamukela futhi ungabahluleli nganoma yini abayizwayo. Njalo isahlulelo ukuthi ubambe kokunye kuzodinga ukuthi kubhekwane nakho futhi kulungiswe noma uzogcina ukukhokhele empilweni yakho. Lapho othile ethi "abasoze" benze okuthile, i- indawo yonke ubona lokhu njengesicelo se- isifundo ngoba batshela indawo yonke ukuthi abakuqondi okuthile. Kanjalo, indawo yonke idala izimo ukuze umuntu athole lokho kuqonda. Ekugcineni, udinga ukuqonda okuphelele ukuze ubuyele ebunyeni. Yonke imibono iba khona ngobunye kepha noma iziphi izahlulelo kungukungazwisisi okuholela ekuhlukaneni; ukudala ukubumbana nokuvimbela ukuhlangana.
Baring umphefumulo wami,
Ukubamba isandla sakho,
uthando lwaphezulu lungandiza.
Vula ingqondo yami,
adalule wonke amaphutha.
Enye indlela yokucabanga,
ukwabelana ngombono owodwa.
Amathegiukuqonda ukukhula komuntu siqu izinkondlo izifundo ezingokomoya ingokomoya Amalangabi Amabili